အမေပေးတဲ့ အမွေ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမေပေးတဲ့ အမွေ (၁)
အမေပေးတဲ့ အမွေ (၁)
Posted by nigimi77 on Feb 4, 2011 in Creative Writing, Cultures, Society & Lifestyle |9comments
ကဲ့ရဲ့ မှာလား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာလား
အမေက အမွေပေးတဲ့ လယ်တစ်ကွက်ကို ကားနဲ့ လဲကြတယ်တဲ့။
ကျောက်ခေတ်တုံးက ငါ့မှာရှိတာနဲ့မင်းမှာရှိတာကို လဲကြသလိုပေါ့။
၀မ်းနည်းစရာတော့ မရှိပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေ အကုန်လုံး ဒီလို
သူ့ လိုအပ်ချက် အတွက် ကိုယ့်အမြင်မှာ မတန်ဘူးလို့ ထင်ပေမဲ့ သူကတော့ လဲပျော်တယ်လို့ယူဆတယ်လေ။ ဒါဆို သူမှန်တာပေါ့။
သူ့ ရဲ့လယ်ကွက်နဲ့ လဲရုံနဲ့ တော့ လွယ်လွယ်မရပါဘူး။
အခု မြန်မာပြည်ရဲ့ လူဦးရေမှာ လယ်ပိုင်ရှင်တွေက များနေတာ။
အသပြာ ပေါနေတဲ့ ဆရာများက တွေ့ ကရာ လယ်ကိုတော့ အလဲထပ် မလုပ်လောက်ဘူး။ တခုခုထူးခြားလို့ နေလို့ သာ။သူလဲ သူ့ အရည်အချင်းနဲ့ သူ။
Society ဆိုတာက ဒါမျိုးတွေ မလွဲမသွေတွေ့ ကြုံရမှာပဲ။
တခြားနိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုကို အတုခိုးတာလို့အသားလွတ်ပြောတာမျိုးကိုတော့
သဘောမတူပါ။ ငွေကြေးကျပ်တည်းရင် ထွက်ပေါက်ရှာမှာပဲ။
ကြိုက်လို့ လုပ်စားသူ ရှားပါတယ်။ သူတို့ တွေကို အပြစ်တင်ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေဖို့ 
မလိုပါ။ မိန်းမကောင်း မိန်းမပျက်လို့ ခွဲခြားပြောနေတာထက်၊ ဒီအလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု တဲ့သူနဲ့တခြားအလုပ်နဲ့အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပြုသူဆိုတာပဲ နှစ်မျိုးနှစ်စားကွဲပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ လုံလောက်ပြည့်စုံတဲ့ အခြေခံလစာ မရရှိပါ။
အောင်လက်မှတ်သာရှိပြီး အရည်အချင်းလုံးဝ မရှိတဲ့ ဘွဲ့ လက်မှတ်တွေ အောင်လက်မှတ်တွေရထားတဲ့ သူတို့ 
ကိုယ် သူတို့ဘွဲ့ ရ ပညာတတ်လို့အတန်းအစား သတ်မှတ်နေတဲ့ သူတွေတောင် သက်ဆိုင်ရာ မေဂျာနဲ့ အလုပ်ရဖို့ ဝေးစွ တလကို လစာ တသိန်းတန်းမှာ ရဖို့ တောင် တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဘွဲ့ ရပြီး တလကို အခြေခံလစာ ၄သောင်းခွဲ လောက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ သူတွေတောင်ရှိပါတယ်။ လမ်းစာရိတ်နဲ့ တင်ကုန်တာပဲ။
စားစာရိတ်က မိဘကပြန်ကျွေးနေကြတာ။ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ နဲ့ဟိုအလုပ် လုပ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ မိန်းမကောင်းဆိုပြီး သတ်မှတ်ကြသည်။
ဒါဆိုရင် အတန်းပညာမရှိ၊ မိဘ အမွေအနှစ်မရှိ အဖေ အမေက ကြုံရာကျဘမ်း အလုပ်လုပ်၊ မဆင်မချင် သားသမီးတွေ လွှတ်မွေး၊ အရွယ်ရောက်တော့ ကျောင်းတောင်မထားနိုင်၊ ပညာကမတတ်၊ နောက်နေ့ စားသောက်ဖို့ တောင် အသပြာက မရှိတော့ခက်ပြီ။ တကယ် ငတ်ဖူးသူများမှ သိလိမ့်မည်။
မငတ်သေးသူများကတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး မေးငေါ့ကဲ့ရဲ့ မည်။ တကယ်တမ်း သူတို့ တွေအား မဆင်မခြင် မွေးဖွားပြီး မိခင်ဖခင်ဟု အမည်သာရှိသည့် လူနှစ်ဦးသည် အဓိက တရားခံဖြစ်သည်။
မကျွေးနိုင်ပဲ မဆင်နိုင် မသင်နိုင်ပဲ အသိဥာဏ် ကင်းမဲ့စွာ လိင်ဆက်ဆံကာ ဆက်ဆံတိုင်းမွေးကြသည်။
ကိုယ့်အိုးနဲ့ ကိုယ့်ဆန်တန်မတန် မသိကြ။
ငတ်တော့ နည်းလမ်းမရှိပြီ။ ထိုအလုပ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီး မိသားစုကို ထောက်ပံ့သည်။
အဲဒီလောက် ၀င်ငွေရရှိမှသာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လဲ နေထိုင်သာပြီး မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ လောက်ငှတယ် ဆိုတဲ့
အချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေပြီ။ သူတို့ ဟာ ကျေးဇူးရှိကြသည်။ နိုင်ငံ၏ အမှန်သရုပ်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေကြတဲ့
ဇာတ်ရုပ်များဖြစ်သည်။ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ အခြေံလစာ ဘယ်လောက်ရမှသာ စားသောက်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို ပြသနေသည်။ သတင်းစာမှာ မုဒိမ်းမှုတွေ ပြည့်နေတာတွေကို သူတို့ က နည်းပါးအောင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ သူတို့ ကျေးဇူးကြောင့် နွားသိုးကြီးများ မုဒိမ်း ကျင့်ရန်စိတ်မကူတော့။
မိဘ၏ အုပ်ချုပ်မှုမှ မကင်းလွတ်သေးသော မိန်းမပျိုများအား ကြံစည်ရန် အားမထုတ်တော့။
(ချွင်းချက်အနေနှင့် သူတို့ ချစ်သူရည်းစားနှင့်တော့ လိင်ဆက်ဆံကြမည်)
ကားပေါ်တွင် လမ်းပေါ်တွင် လက်ဆော့တတ်သောသူများ နည်းပါးသွားစေသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လုပ်ယူရတာပါ … အခု မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်ပျက်နေတာကို သွားပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး …။ သူ့ထိုက်နဲ့ သူ့ကံလွှတ်ပေးထားရပါတယ် ။ အမြင်မတော်လို့များ ၀င်မဝေဖန်ရဲပါဘူး… ပြောတဲ့လူမောတဲ့ အပြင် အဆဲခံရနိုင်လို့ပါ … ။
ထိုင်ကြည့်နေမဲ့အစား ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဖြင့် ကောင်းပါလိမ့်မယ် ဆွေးနွေးကြတာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်….
တခါတရံ ကြုံလာခဲ့ရင် ကြိုးစားကြည့် ကြတာပေါ့….
Gipsy ရယ် ဒီလို မိန်းမတွေကို ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာလဲ ။ ဘယ်လိုမှ ဖြောင်းဖျလို့မရဘူး …. ။
အပိုင်း (၂) ဖတ်ပြီးရင်တော့ အဆဲခံရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ ။
အပိုင်း (၁) ဖတ်ပြီး ကတည်းက ဆဲချင်နေတာ …ခဏသည်းခံလိုက်ဦးမယ်
မြို့ ပြရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်က လုပ်စားနေကြသလဲ သိချင်သား..။
မြန်မာပြည်မှာ .. surveyလုပ်လုပ်ပေးတဲ့..Poll လုပ်ပေးတဲ့.. မီဒီယာစံနစ်တခုလိုနေတယ်..။
လုပ်ချင်တယ်ဗျ။ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကို မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
တနိုင်ငံလုံး လူ ၃၀၀၀လောက်ကို လက်တန်းကောက်ရွေးလိုက်တယ်.. ပြီးတော့ ..ဖုံးဆက်ပြီး မေးခွန်းမေးတာပဲ..။
အဲဒီကနေ … ထုတ်ပြန်တာ..။
အဲဒီပရောဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ က . .. အဲဒီဘားဖွင့်မဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ ခုံနေရာယူပြီး … မြန်မာပြည်က ပုတီးစိတ်တဲ့ကောင်တာမျိုးနဲ့ .. ထိုင်ကလစ်လုပ်တယ်..။
ဒီနားကဖြတ်တဲ့သူ .. ညနေပိုင်းမှာ .. ဥပမာ..စနေ၊တနင်္ဂနွေတွေမှာ .. အသက်တန်း ၃၀-၆၀-တန်းယောင်္ကျားဘယ်လောက်။ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းမငယ်ဘယ်လောက်.. ၊ ဆယ်ကျော်သက်ယောင်္ကျားလေး.. ဘယ်နှယောက်စသဖြင့်ပေါ့..။
ပြိးတော့ သန်းကောင်စာရင်းက လူဦးရေတွေနဲ့တိုက်စစ်တာပဲ..။
ဒီလိုစီးပွားရေးမျိုးက .. ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ ယောက်ျားတွေအ၀င်အထွက်ရှိမှ ..အဆင်ပြေမှာကိုး..။
အဲဒါမျိုးကို.. ဇယားလုပ်ပြီး ..ကလပ်ဖွင့်မဲ့သူကို ပြန်ရောင်းစားတယ်..။ တော်တော်ကြေးကြီးတာလို့တော့သိတယ်..။
ဒီမှာ ..မက်ဒေါ်နယ်၊ ကော်ဖီဆိုင်။ ဓါတ်ဆီဆိုင်အကုန်အဲလိုလုပ်ပြီးမှ ..ဆုံးဖြတ်ကြတာပဲ..။
ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ..ဆာဗေးဖောင်လေးပါထည့်ပေးပြီး ..စာရင်းကောက်တာပေါ့..။ ဖုန်းနဲပါတ်ရရင်လည်း ခဏခဏဆက်ဆက်မေးနေတာပေါ့..။ တချီု့ ဆာဗေးတွေက ဖြေရင်လက်ဆောင်ပြန်ပေးပါတယ်..။
မြန်မာပြည်က မြို့ ပြရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်က လုပ်စားနေကြသလဲ သိချင်ရင်တော့ .. ရပ်ကွက် ၃၀ခုလောက်ကို .. ရန်ကုန်အနှံ့ ဖြန့်ပြီး .. ဆိုင်ရာနယ်ခံတွေ။ ရဲတွေ၊ လဖက်ရည်ဆိုင်တွေ။ ဆိုက်ကားသမားတွေမေးပြီး စာရင်းကောက်ရမှာပဲ..။ငွေပေးမေးပေါ့..။
မေးတဲ့သူတွေက .. မီဒီယာကာဗာရှိတယ်ဆိုရင်. .. ဖြေကြမလားတော့ မသိ…။
အဲဒီစာရင်းကိုင်ပြိး ..ကုလသမဂ္ဂတို့.. နိုင်ငံခြားက အန်ဂျီအိုတို့ကို .. ကျမ်းမာရေးအကူအညီတွေတောင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်..။
အဖေါ်တို့။ သားဆက်ခြားအတွက်..ပညာပေးအတွက် ထောက်ပန့်ငွေတို့က .. အဲဒါမျိုးတိတိကျကျကောက်ထားတာရှိရင်.. ပေးကိုပေးရတယ်လေ…။
(မငတ်သေးသူများကတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး မေးငေါ့ကဲ့ရဲ့ မည်။ )
ဒီစကားကိုထောက်ခံပါတယ်….. ဒီကနေ့ခောတ်မှာ လူအများစုက ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျသူကို ကဲ့ရဲ့ချင်တာ ဘာအကျင့်လဲမသိပါ….. အထူးသဖြင့် အလုပ်တွေမှာ ဒါမျိုးတွေပိုတွေ့ရပါတယ်…… ကိုယ့်မိသားစုအခြေအနေနဲ့ လက်ရှိ အလုပ်မှာ ရာထူးမရှိနိမ့်ကျနေသောသူရဲ့ မိဘ အခြေအနေခြင်း မိုးနဲ့မြေ ကွာခြားနေရင်တောင်မှ သူတို့က နှိမ်ချင်ကြတယ်ဆိုတာကတော့ မျက်မြင်ပါပဲ……….. မြန်မာတွေ အဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့ဒဏ်၊ ရာထူးစည်းစိမ်ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြဘူးဆိုတာအရမ်းသိသာလွန်းပါတယ်…………. ဒီလိုပြောနေတာ ပိစကွေးခံစားရလို့တော့ မဟုတ်ပါ……… ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာကြုံတွေ့နေရလွန်းလို့ပြောပြပါတယ်………. ပိစိကွေးအပြင်မှာတော်တော်လူမုန်းခံရပါတယ်….. ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲ မတရားဘူးထင်ရင် ၀င်ဝင်ပြောတတ်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေကတောင်တားယူရပါတယ်…… မှန်လွန်းရင် ရွာပြင်ထွက်နေရတယ်တဲ့……… ပိစိကွေးကတော့ပြောမှာပဲ မတရားဘူးထင်ရင်………. ၀ဋ်ဆိုတာလည်ပါတယ်တဲ့…….. ဘယ်တော့မှလည် မှာလည်းတော့မသိဘူး……… ပိစိကွေးလေ မြန်မြန် ၀ဋ်လည်စေချင်နေပြီ မတရားတဲ့သူတွေကို……… ဒါမှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခံစားရမှ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာရှိလာကြမှာ………….